Socdaalkii Roob-doon iyo Dhagaxdhiga Mashaariicaha Degmooyinka Cusub. - Cakaara News
Socdaalkii Roob-doon iyo Dhagaxdhiga Mashaariicaha Degmooyinka Cusub.
Qabridahar(cakaaranews) khamiis, 23,march, 2016, Waftigii uu hogaaminayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ku guda jiray socdaalka loo bixiyay Roob-doon ayaa saaka aroortii hore ka bilaabay booqasho indho-indhayn ah mashaariicaha waawayne ee ka socda maamulka magaalada qabridahar. Gaar ahaan garoonka wayn ee diyaaradaha M.M qabridahar oo gabagabo maraya iyo cusbitaalka mm qabridahar oo dhismayaashiisa dib u habayn lagu sameeyay .
Markii ay waftigani ka anbabaxeen mm qabridahar ayaa waxay booqdeen mashruuca biyo xidheenka laga hirgaliyay tuulada dalaad ee degmada qabridahar kaasi oo la soo gabagabeeyay dhismihiisa. Sidoo kale waftigan ayaa maanta galinkii hore ka qaybgalay xaflada daahfurka iyo dhagaxdhiga mashaariicaha degmada cusub ee laas-dhankayre oo ka mid ah degmooyinka cusub ee ku soo beeray degmooyinka deegaanka gaar ahaan Gobolka qoraxay. Halkaasi oo uu madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar khudbadii daah-furka degmadan cusub ka soo jeediyay ka dibna dhagax dhigay mashaariicaha kala duwan ee degmada laas-dhankayre
Waftigan ayaa maanta duhurnimadii u anbabaxay dhanka iyo degmada cusub ee Eleela oo ka mid ah 25kii degmo ee uu dhawaan ansaxiyay golaha baarlamaanka DDSI kana mid ah degmooyinka ku soo biiray gobolka shabeele.
Waxaana waftigan siwayn loogu soo dhaweeyay masaafo dheerna ay dadwaynuhu kaga horyimaadaan degmada cusub ee eleela, xafladii loogu dabaal dagayey degmadan cusub oo ay iskugu yimaadeen dadwayne aad u tiro badan islamarkaana goobta ay xafladani ka dhacaysay ahayd mid aad loo sii qurxiyay.
Waxaana furitaankii xafladaasi ka soo jeediyay khudbad dheeli tiran madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar wuxuuna ugu horayntii madaxwaynuhu ugu banbalyeeyay dadwaynaha ku dhaqan degmada cusub ee eleela xafladan lagu daah-furayo degmadan cusub iyo dhagaxdhigan mashaariicaha kala duwan ee degmadan.wuxuuna tilmaamay madaxwaynuhu in ay degmadani ahaan jirtay meelaha ka qalalsanyad helitaanka adeegyada aas aasiga ah ee horumarka islamarkaana ahayd meelaha uu naafeeyay nabad diidkii wakhtiyo hore ka dhaq dhaqaaqi jiray deegaanka. Wuxuuna sheegay madaxwaynuhu in ay tahay meel ku haboon in degmo laga dhigo taasi oo ay hadda u bilaabmidoonto helitaanka helitaanka adeegyada aas aasiga ah ee horumarka
Wuxuuna madaxwaynuhu ku booriyay bulshada ku dhaqan degmadan cusub ee elleela in ay ka qayb-qaataan hirgalinta hawlaha horumarineed ee hadda ka bilowday degmadan islamarkaana ay xooga saaraan dhinaca wax soo saarka beeraha. Waxaa kale oo uu madaxwaynuhu carabka ku adkeeyay dhibaatooyinka iyo aafooyinka argagixisanimada iyo in dareen dheer ay bulshadu ka lahaato, si gaar ahna isha loogu qabto meelaha bacarimin karta aragtida argagixisanimada. Wuxuuna madaxwaynuhu u sheegay bulshada in ay roob-doon akhritaan.
Ugu danbayntiina waxa uu madaxwaynuhu dhagaxdhigay dhismayaasha kala duwan ee mashaariicaha degmada cusub ee elleela.
Dhankooda qaybaha kala duwan ee bulshada degmada elleela oo ka hadlay xafladaasi ayaa ka warbixiyay sida ay ugu faraxsan yihiin dhamaanba 25kii degmo 2dii maamul magaalo iyo 2dii gobol ee dhawaan uu ansaxiyay golaha baarlamaanku kuwaasi oo tilmaamay in ay siwayn uga qayb-qaadanayaan dhismaha hawlaha horumarka ee degmadan cusub.
Waftigan ayaa caawo xili habeenimo ah ku soo noqday xarunta gobolka qoraxay ee magaalada qabridahar halkaasi oo ay caawa u hoyden.